War - Miyaad Iibsataa Muraayada Muraayadda Mootada?
Yaraynta qiiqa dabaysha waxay yareysaa daalka raacitaanka. Way fududahay. Hadday tahay safar Axad dheer ama safar toddobaadle ah, feejignaan iyo qaboojiye xagga sarkaalka waxay si weyn uga caawineysaa inaad ku geyso halkaad u socoto hal xabbo.
Xilliga cimilada oo xun, muraayadda hore ee muraayadda waxay bixisaa raaxo kordhin iyo ka ilaalinta cunsurrada. Ma fuushan tahay roobka adoo rajeynaya inaad qoyantahay, ama raacid cimilada qabow adoo rajeynaya inaad qabow yeesho. Waxaad isticmaashaa muraayad si aad u maamusho fuulista cimilada ee wadata kuwa kale ee guriga ku jira.
Wejigaaga nadiif ayey ka dhigeysaa, sidoo kale!
La awoodi karo waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku dari karto baaskiilkaaga si aad u kordhiso raaxadaada fuushan ama aad u horumariso kala duwanaanshaha ama waxqabadka baaskiilkaaga.
Muraayadaha hore waa maalgashi qiime jaban oo bixiya faa iido badan, maxaa yeelay waxay hubaal ka dhigeysaa khibradaada fuulitaanka. Xitaa nidaamka muraayada-dhamaadka sare, waa maalgashi yar marka la barbardhigo casriyaynta hakinta, nidaamka qiiqa ama shaqada waxqabadka mashiinka.
Xaqiiqdii, Muraayadaha hore waa kuwo la awoodi karo oo aad iibsan karto laba cabbir ama qaabab kala duwan si loo kordhiyo kartida mootada maalinlaha ah.
Alaabada Featured - Khariidadda bogga Vespa Gts Gtv 300 Boorsada Iskuulka, Muraayada hore ee Honda Nmax, Baaskiilka Gaaska Baaskiilka, Vespa Gts 300 Gtv Rakaabka Shandadaha, Baaskiil Baaskiil Flat ah, Rakibaadda Iskuulka Kawasaki,